नेपाल आज | प्रधानमन्त्रीको आत्मविश्वास, चिकित्सक उत्साहित (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्रीको आत्मविश्वास, चिकित्सक उत्साहित (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफनै देशको सरकारी अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न थालेपछि नेपाली चिकित्सक उत्साहित भएका छन् । नेपाली चिकित्सक र आफनै देशको सरकारी अस्पतालप्रति प्रधानमन्त्रीले गरेको विश्वास सबैका लागि प्रेरणा भएको बताउँछन् स्वास्थ्य विश्लेषक डा. मनोर दिन सैयद ।
डा. सैयद भन्छन्, ‘ नेपालमा एकथरी आधारभुत उपचारबाट समेत वञ्चित छन् । अर्कोथरी रुघा लाग्दासमेत विदेश जान्छन् । यो बेला प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण जस्तो जटिल शल्यक्रिया आफनै देशको सरकारी अस्पतालमा हुनुले नेपाली चिकित्सा क्षेत्रको सक्षमता प्रमाणित गर्दछ । प्रधानमन्त्रीले गरेको विश्वास हामी सबै चिकित्सकका लागि प्रेरणाको श्रोत हो । ’
कतिपयले विदेशी चिकित्सक आएको कुरालाई लिएर नेपाली चिकित्सकको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्, त्यो गलत हो । विदेशी चिकित्सक सहयोगका लागि मात्र आएका हुन् । नेपाली चिकित्सककै नेतृत्वमा शल्यक्रिया हुन लागेको हो । त्यसमा पनि अझ डा. प्रेमराज ज्ञवाली भनेका नेपालका ख्यातीप्राप्त डाक्टर हुन् । उनी र उनको टिम निकै सक्षम छ ।
प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रिया सफल हुनेमा कुनै शंका नभएपनि शल्यक्रियापश्चात हुने जटिलतामा भने सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अधिक रक्तश्राव हुने, राखिएको मिर्गौलालाई अकस्मात शरीरले ग्रहण नगर्ने लगायतका समस्या देखिन सक्छन् । यसका लागि चिकित्सकको निगरानी निरन्तर भैरहन जरुरी छ ।
डा. सैयदका अनुसार अहिले नेपालमा नक्कली औषधिको खुलेआम विक्री वितरण भैरहेको देखिन्छ । सरकारले यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ । सामान्य औषधि खाएकै कारण विरामीको मिर्गौला खराब भएका घटना बाहिर आउन थालेपछि नक्कली औषधिबारे थाहा हुन थालेको हो । कसैको प्रभावमा परेर नक्कली औषधि सिफारिस गरेको पाइए त्यस्तो डाक्टरलाई पनि तत्काल कारवाही गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
अहिले विश्वमै चुनौतीकारुपमा रहेका कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालका लागि झन जटिल चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । सरकारले ढिलै भएपनि केही सतर्कता अपनाएपनि सर्वसाधारण आफै बढी सजग हुनुपर्छ ।
डा. सैयद भन्छन्, ‘ कोरोना संक्रमण नहोस भन्नका लागि होशियारी अपनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानी हो । यसका लागि भीडभाडमा नजाने, एन–९५ मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले निरन्तर हात धुने, तातो पानी निरन्तर पिउने, चिसोमा नबस्ने, खोक्दा हाच्छ्यूँ गर्दा रुमालले छोप्ने गर्नुपर्दछ । हात मिलाउने, अंकमाल गर्ने जस्ता काम गर्नु हुँदैन । ’
यदि संक्रमण भैहालेछ भनेपनि डराउनु पर्दैन । कोरोना संक्रमण हुँदैमा ज्यान जाने भन्ने हुँदैन । संक्रमित मध्ये २ प्रतिशत मात्रै मर्ने गरेका छन् । १५ देखि २० प्रतिशतलाई भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा दुई हप्तादेखि २७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नु स्वभाविक हो ।
नेपालमा कुनैपनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । संविधानमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने तर बजेट नछुट्याउने नीति आफैमा विपरित छ । सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याउन जरुरी छ ।
सरकारी चिकित्सक देशभर तीन–चार हजार मात्र छन् । सरकारले तुरुन्त सरकारी चिकित्सकको दरवन्दी थप्नुपर्छ । अन्यथा, निजी क्षेत्रकै भर पर्नु बाहेक अर्को उपाय छैन ।